ငယျငယျတုနျးကတော့ ကမ်ဘာကွီးကို ကယျတငျဖို့ စူပါမနျးဖွဈခငျြခဲ့တာ – Shinyoon
ငယျငယျတုနျးကတော့ ကမ်ဘာကွီးကို ကယျတငျဖို့ စူပါမနျးဖွဈခငျြခဲ့တာ
ငယျငယျတုနျးကတော့ ကမ်ဘာကွီးကို ကယျတငျဖို့ စူပါမနျးဖွဈခငျြခဲ့တာ အရှယျရောကျလာတော့ ကိုယျ့ကိုယျကယျတငျဖို့တောငျ မနညျး ကွိုးစားနရေတာလေ အသကျရှငျရပျတညျဖို့ ကိုယျ့ပနျးတိုငျကိုယျ ဆကျပွီးလြှောကျနနေိုငျဖို့ အမြားကွီးပါ . . .
စိတျဓာတျတှကေခြဲ့ဖူးသလို အမြားကွီးလဲ ဆုံးရှုံးနဈနာခဲ့ရဖူးပါတယျ ဒီလိုအခြိနျတှမှောတော့ တပါးသူတှအေတှကျ ဟီးရိုးဖွဈဖို့ နနေသောသာ ကိုယျကိုယျတိုငျတောငျ မနညျးထူမပွီးနရေတာ ငယျငယျကတော့ အားကလြို့သာ ဖွဈခငျြခဲ့တာ တကယျ့ဘ၀က အဲ့ဒီလောကျ ခကျခဲတတျမှနျး မသိခဲ့ဘူး
ကိုယျ့ခဈြရ ခငျရတဲ့သူတှကေို စိတျမပကျြအောငျ ထားနိုငျဖို့တောငျ မနညျးကွိုးစားနရေတာလေ လူတိုငျး လေးစားအားကရြတဲ့ စူပါဟီးရိုးတဈယောကျဖွဈဖို့တော့ အိပျမကျတှေ မကျမနနေတေော့ပါဘူး ကိုယျ့ဘ၀အတှကျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ဟီးရိုးဖွဈနဖေို့ပဲလိုတယျ
ကိုယျ့မိသားစုအတှကျ အားကိုးအားထား ရတဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈနဖေို့ပဲလိုတယျ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြအတှကျ အနှောငျ့အယှကျမပေးတတျတဲ့ လူတဈတဈယောကျ ဖွဈဖို့ပဲလိုတယျ စှမျးအားတှေ ပါဝါတှေ ရှိနမှေ စူပါမနျးလို ဟီးရိုးဖွဈနိုငျတာမဟုတျဘူး
ဟီးရိုးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျက လိုအပျတဲ့အခါ အမွဲရှိနပွေီး ဒုက်ခဖွဈတဲ့ အမွဲကယျဆယျ ကူညီတတျတာမြိုးပါ အခုလောလောဆယျတော့ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျ မနညျးဆယျယူနတေဲ့ ရိုးရိုးဟီးရိုးပေါ့
နောငျတဈခြိနျကရြငျ ကိုယျ့စှမျးအားနဲ့ ကိုယျ့လုပျအားနဲ့ မိသားစုကိုပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကိုပဲဖွဈဖွဈ ကမ်ဘာကွီးကိုပဲဖွဈဖွဈ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ ဟီးရိုးဖွဈအောငျ ကွိုးစားနပေါတယျ ဒီလောကျပါပဲ ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ စူပါမန်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်ဖို့တောင် မနည်း ကြိုးစားနေရတာလေ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုယ် ဆက်ပြီးလျှောက်နေနိုင်ဖို့ အများကြီးပါ . . .
စိတ်ဓာတ်တွေကျခဲ့ဖူးသလို အများကြီးလဲ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရဖူးပါတယ် ဒီလိုအချိန်တွေမှာတော့ တပါးသူတွေအတွက် ဟီးရိုးဖြစ်ဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မနည်းထူမပြီးနေရတာ ငယ်ငယ်ကတော့ အားကျလို့သာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ တကယ့်ဘ၀က အဲ့ဒီလောက် ခက်ခဲတတ်မှန်း မသိခဲ့ဘူး
ကိုယ့်ချစ်ရ ခင်ရတဲ့သူတွေကို စိတ်မပျက်အောင် ထားနိုင်ဖို့တောင် မနည်းကြိုးစားနေရတာလေ လူတိုင်း လေးစားအားကျရတဲ့ စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ အိပ်မက်တွေ မက်မနေနေတော့ပါဘူး ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဟီးရိုးဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်
ကိုယ့်မိသားစုအတွက် အားကိုးအားထား ရတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အနှောင့်အယှက်မပေးတတ်တဲ့ လူတစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ် စွမ်းအားတွေ ပါဝါတွေ ရှိနေမှ စူပါမန်းလို ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး
ဟီးရိုးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လိုအပ်တဲ့အခါ အမြဲရှိနေပြီး ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ အမြဲကယ်ဆယ် ကူညီတတ်တာမျိုးပါ အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မနည်းဆယ်ယူနေတဲ့ ရိုးရိုးဟီးရိုးပေါ့
နောင်တစ်ချိန်ကျရင် ကိုယ့်စွမ်းအားနဲ့ ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ မိသားစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ဒီလောက်ပါပဲ ။